फ्रान्सकै चर्चित भालेले बासिन्दालाई अदालत पुर्यायो !
२०७६ मङ्सिर ९ सोमबार १०:४६:०० मा प्रकाशित
बिकसित र पुरानो देश फ्रान्समा यतिबेला कुनै विश्व तहको बिषयमा भन्दा कुखुराको भालेको चर्चा भैरहेको छ । सभ्य कहलिएका फ्रान्सेली नागरिक त्यो भालेको चर्चा गर्दै वाईन पिउन आनन्द मानिरहेका देखिन्छन् ।
भाले पनि चानचुने भाले होइन । स्थानीय सेन्ट पियारी डी ओलेरनमा रहेको ४ वर्षको भाले चर्चामा आउनुको पनि खास कारण छ । कोरिन फेसाउ भन्ने फ्रान्सेली नागरिकले एटलान्टिक समुन्द्रको किनारमा त्यो भाले पालेकी छिन् । बिहान भाले बास्दा वरपरका बासिन्दाको निन्द्रा खल्बलिन थालेपछि भाले त्यसक्षेत्रमा सेलिब्रेटी झैं चर्चामा आएको हो । त्यस भालेले स्थानीय बासिन्दालाई आकर्षित गरेको छ भने उनीहरुको दैनिकीमा पनि भालेको कुरा काट्नुपर्ने वाध्यता आईपरेको छ ।
दुई वर्षअघि घरधनिले भाले मौरिस ल्याउँदा घर नजिकका ज्याकि फेसाउ र कोरिनलाई खिज्याउँदै थियो । यस किसिमको कुखुराको आवाजले छिमेकी आजित भएका थिए । ओरोलिन महाद्वीपमा २०१७ मा छिमेकीको लागि लेखिएको एक चिठ्ठीमा विरन भन्छन्,“मौरिस ४ः३० बजे उठ्छ । अनि बास्न शुरु गर्छ । बिहानीपख र अबेर साँझसम्म यो चिच्याउँछ ।”
यस किसिमको हल्लाले बिचलित भएका स्थानीयले राजनीतिक दल र वकिल समेत गुहारेका छन् । उनीहरु मध्यस्थताको माग गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । कोरिन फेसाउ भन्छन्,“म मौरिनसँग स्वयं आजित छु । झन् छिमेकीहरुको त के कुरा गर्ने ? हल्ला खल्ला त्यस्तै हो ! हामी मिलेर वातावरणलाई शान्त पार्नुपर्छ, शान्तिसँग बस्नुपर्छ !”
यो बिषयमा स्थानिय अदालतमा रोकेफर्टमा जुलाईमा मुद्वा चलेको पनि हो । अब यसबारेमा राम्रो नतिजा आउँछ भनिएको छ ।
स्थानिय लि मण्डे पत्रिकामा भालेसँग बिच्किएका स्थानीयलाई लिएर एउटा समाचार पनि छापिएको छ,“समस्याको हल कानूनी हुनुपर्छ ।”
मौरिस भालेको समस्याले एक दशक पार गरेको छ । शहरका बासिन्दा जो ग्रामिण क्षेत्रमा घर किन्न आउँछन् उनीहरुलाई पशुपंक्षिका आवाज र विथोलिएको वातावरण तनावपूर्ण लागेको हो ।
यता एकथरी मानिस मौरिस भालेसँग बिच्किए पनि उसलाई देशका अन्य भूभागबाट सहानुभूति र सहयोग प्राप्त भैईरहेको बताइएको छ । फ्रान्स शहरमा जनावरको लागि कानून बनेको धेरै समय भएको छ ।
अर्को अचम्मको कुरा त के छ भने स्थानिय व्यापारी विनोइट ग्युटन मौरिस भालेको तस्बिरको छाप भएको टिसर्ट लगाएर पसलमा बस्छन् र व्यापार गर्छन् । तर पनि उनी भालेको बारेमा थप प्रसंग कोट्याउँदै भन्छन्,“कोर्निस संघलाई मद्दत चाहिएको छ । त्यसरी ठूलो स्वरले अर्काको ध्यान भंग हुने गरी बास्न पाइन्छ । मानिसहरु रिसाएका छन् । कानूनी उपचार खोजिनै पर्छ !” (एजेन्सीबाट)